By Wariyaha Garoowe , GAROWE ONLINE
GAROOWE, Puntland - Maamulka gobolka Nugaal ayaa ku dhawaaqay in isu socodkii u dhaxeeyay deegaanada Puntland iyo Somaliland la joojiyay, kadib markii shalay uu dagaal ka dhacay Tukaraq.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa shaaciyay in go'aan kasoo baxay dowladda lagu hakiyay gaadiidkii ka tagi jiray Puntland ee aadi jiray Somaliland iyo kuwii ka imaan jiray Somaliland.
Wuxuu sheegay in illaa amar dambe aysan jiri doonin wax dhaq dhaqaaq ah oo u dhaxeeyay Somaliland iyo Puntland, marka laga reebo gaadiidka ay wataan Mas'uuliyiinta dowladda iyo Ciidamada qalabka sida.
Faraweyne ayaa xusay in ay jiraan xaalado la xiriiro xiisado colaadeed, ayna dib ka soo sheegi doonaan amarka dambe ee lagu furayo wadooyinka isku xira labada maamul.
Gaadiidkii ku socday Somaliland ayaa ku kala xayiran magaalada Garoowe halka kuwii kasoo baxay Somaliland ay hakad ku galeen degmada Laascaanood ee gobolka Sool.
Xiisadda taagan ayaa ka dhalatay Safarkii dhawaan Wasiirka Qorsheynta dowladda Federaalka Jamaal Maxamed Xasan uu ku tagay degaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag, taasi oo sababtay in shalay Somaliland ay duulaan kusoo qaado Tukaraq oo horey u joogeen ciidamada Puntland. Halkan ka akhri.
Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa loogu baaqey inuu Xasaanada ka qaado Xildhibaanka...
Dowladda Soomaaliya oo War ka soo saartay xiisada Takaruq
War Saxaafaded 10.01.2018. 11:39
Xaaladda dadkii ka barakacay Tukaraq oo laga dayriyay
Puntland 30.01.2018. 10:03
Madaxweyne Farmaajo oo baaq kasoo saarey Colaadda Tukaraq
War Saxaafaded 25.05.2018. 17:01
IGAD oo Arrinta Tukaraq kala hadashay Soomaaliland [Daawo]
Somaliland 18.02.2018. 13:42
Mareykanka oo dil toogasho ku fuliyey nin indhoole ah 06.12.2019. 10:40
Guddi qayb ka noqonaya gurmadka Gardafuu oo la magacaabay 05.12.2019. 22:11
Guddiga biladda nabada aduunka oo dhaliil u jeediyey Abiy Axmed 05.12.2019. 21:00
Qaramada Midoobay oo fahfaahin ka bixisay kulankii Shariif iyo Swan 05.12.2019. 20:01
Maxaa looga hadlay kulanka Shariif iyo wakiilka UN-ka ee Soomaaliya? 05.12.2019. 14:45
Al-Shabaab oo xubno "u daabushay" xadka Soomaaliya iyo Kenya 05.12.2019. 13:10